Ch 15 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 15 Matthew
15:1 Then the scribes and the Pharisees came to him from Jerusalem, nanao hoe::
15:3 But responding, dia hoy izy taminy: “And why do you transgress the commandment of God for the sake of your tradition? For God said:
15:4 ‘Honor your father and mother,'ary, ‘Whoever will have cursed father or mother shall die a death.’
15:7 Hypocrites! How well did Isaiah prophesy about you, nanao hoe::
15:10 And having called the multitudes to him, dia hoy izy taminy: “Listen and understand.
15:15 Sy ny fandraisana andraikitra, Hoy Petera taminy:, “Explain this parable to us.”
15:16 Fa hoy izy:: “Are you, izao ankehitriny izao ihany, without understanding?
15:21 Ary niala teo, Jesosy niala teo ho any amin'ny faritra tanin'i Tyro sy Sidona.
15:22 Ary indro, nisy vehivavy Kananita, nivoaka avy ireo ampahany, niantso, nanao taminy hoe:: "Mamindrà fo amiko, Tompo, Zanak'i Davida. Ny zanako-vavy ratsy ory amin'ny demonia. "
15:23 Tsy hoe ny teny ho azy. Ary ny mpianany, manakaiky, nangataka azy, nanao hoe:: "Dismiss azy, fa izy no mitaraina aoriantsika. "
15:24 Sy ny fandraisana andraikitra, hoy izy:, "Tsy nirahina Aho afa-tsy ho amin'ny ondry izay efa lavo niala tamin'ny taranak'Isiraely."
15:25 Fa nanatona izy ka niankohoka azy, nanao hoe:, "Tompo ô, ampio aho."
15:26 Sy ny fandraisana andraikitra, hoy izy:, "Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny amboakely."
15:27 Fa hoy izy, "Eny, Tompo, fa ny zanany ihany koa ny mihinana alika avy hihinana izay latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony. "
15:28 Avy eo Jesosy, mamaly, nanao taminy hoe:: "O vehivavy, lehibe ny finoanao. Aoka hatao ho anao araka izay irinao. "Dia sitrana ny zananivavy tamin'izay ora izay.
15:29 Ary Jesosy, nony niala teo, tonga teo akaikin'ny Ranomasin'i Galilia. Ary niakatra tao an-tendrombohitra, dia nipetraka teo.
15:30 Ary nisy vahoaka betsaka nanatona Azy, ka niaraka taminy ny moana, ny jamba, ny mandringa, ny kilemaina, ary ny maro hafa. Ka nametraka azy teo amin'ny tongony, ka nositraniny,
15:31 betsaka ka dia gaga ny vahoaka, nahita ny moana miteny, ny mandringa afaka, ny jamba mahiratra. Dia nanandratra ny Andriamanitry ny Isiraely,.
15:32 Ary Jesosy, niantso avokoa ny mpianany, nanao hoe:: "Mahonena Ahy ny vahoaka, satria efa naharitra niaraka tamiko nandritra ny telo andro izao, ary tsy manana na inona na inona mba hihinana. Ary izaho no tsy vonona ny handroaka azy ireo, fifadian-kanina, fandrao reraka eny an-dalana. "
15:33 Ary ny mpianatra dia nanao taminy hoe:: "Avy aiza, avy eo, any an-efitra, dia isika hahazo mofo ampy hanome fahafaham-po toy izany dia nisy vahoaka betsaka?"
15:34 Ary hoy Jesosy taminy:, "Firy ny mofo ve ianao manana?"Fa hoy izy ireo:, "Fito, ary hazandrano madinika vitsy foana. "
15:35 Dia nandidy ny vahoaka mba nipetraka teny ambonin'ny tany.
15:36 Ary noraisiny ny mofo fito sy ny trondro, sy nisaotra, dia novakiny ka natolony ny mpianany, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka.
15:37 Dia nihinana izy rehetra ka voky. Ary, avy amin'ny zava-sisa ny sombintsombiny, dia naka sobika fito feno.
Aogositra 25, 2019